Nandray anjara tamin’ny el xat de Twitter vao haingana? Raha tsy ha estat dia inona no mitazona anao?
Ny chattera Twitter dia adin-tseraseran’ny varotra tsy maintsy atao. Voaporofo ho tetikady tena ilaina hanorenana fitokisana, hampitombo ny fahatsiarovan-tena, ary hampitombo ny fifandraisana amin’ny mpihaino anao.
Raha Manontany Tena ianao hoe ahoana no hanombohana ni sehatra Twitter anao manokana, Eto ary Eto dia mpitarika lehibe tokony harahina.
Ny WHSR dia nanomboka ny tenifototra #WHSRnetChat manokana, manatratra ireo mpitoraka blaogy, influencers, olona, ​​marika, fikambanana, sns … mba hanangona ny fomba fijeriny sy ny fanehoan-kevitra momba ny lohahevitra mifandraika amin’.
Nanomboka fanentanana amin’ny xat xat izahay miaraka amin’ny tanjona iray – mba hanampy ny mpamaky hanangana bilaogy tsara kokoa.
2 #WHSRnetChat Q2. Inona ny fitaovana entinao ho és un mitjà mediàtic?
2016 dia manohy ny taona maha-sarotra ny indostrian’ny blaogy. Miaraka amin’ny toro-lalana vaovao avy amin’i Google Ny fomba hanatsarana no fitadiavana, no mpitoraka bilaogy dia andrasana hametraka asa mafy kokoa mba hahazoana ny tsara indrindra.
Ireto ny Sasany amin’ireo valinteny WHSR nahazo ny fanontaniana napetraka tao amin’ny bitsika nalefantsika voalohany tao amin’ny Twitter:
– Daysinbed (@Daysinbed) 10 de gener de 2016
– Angie Silver (@SilverSpoonLDN) 19 de gener de 2016
– Fuggs sy Foach (@fuggsandfoach) 7 de febrer de 2016
Maro tamin’ireo mpandray anjara amin’ny rindrambaiko Twitter no nanoso-kevitra no fiantohana si no així mafy dia no fanalahidy fototra amin’ny fananganana bilaogy.
Heveriko fa tena zava-dehibe foana ny fifanarahana. Raha ny toe-tsaina, fifantohana, lahatsoratra & mitjans de comunicació sosialy. #bloggingtips # estil de vida #WHSRnetChat
– Miantso anao Mama (@YouBabyMeMummy) 10 de gener de 2016
Ataovy hatrany izany! Miangavia ary tsy matahotra ny hizara ser amin’ny olon-drehetra!
– Christina Nicholson (@MediaMaven_CN) 11 de gener del 2016
Manana feon-tononkira miavaka raha ny fitorahana blaogy dia manan-danja joguina no fanoratana no votoaty tsara.
– Fiainan’ny fianakaviana lehibe kokoa (@largerfamily) 15 de gener de 2016
Ireto misy sombiny sasantsasany amin’ny fameranana ni fanontaniana voalohany ao amin’ny Twitter:
Article relacionat: Ahoana ny fiovan’ny tarehimarika amin’ny 2016
#WHSRnetChat Q2. Inona ny fitaovana entinao ho és un mitjà mediàtic?
Ny fitantanana no fanatrehanao sosialy dia iray amin’ireo lafin-javatra tsy takatry ny very. Marina koa fa mandany foto betsaka sy herinao no fitantanana ni fanatrehana ni sosialy. Nosoratanay tamin’ny bilaogera sy ny tsena io fanontaniana io ary valiny asongadiny ny valiny.
– Miantso anao Mama (@YouBabyMeMummy) 23 Martsa 2016
Ei! Mazava buffy sombin’ny buffer, Tweet Jukebox + Sprout Social ??? [@buffer @SproutSocial @alphabetsuccess] #WHSRnetChat ???
– Sam Hurley ????????? (@Sam___Hurley) 30 Martsa 2016
Buffer i HootSuite no ampiasaiko matetika.
– Ileane Smith (@Ileane) 24 Martsa 2016
Mampiasa Hootsuite i Social Oomph aho
Maro no ao, buffer, Hootsuite, etc
– Harleena Singh (@harleenas) 28 de març del 2016
Nanangana antontan’isa tsy ofisialy momba ity fanontaniana ity izahay. Raiso ho joguina ni famelabelarana raha mbola tsy manapa-kevitra ianao hoe iza no fitaovana fitantanana ny media sosialy tokony hofidiana.
Araka ny hitanao, ny ankamaroan’ny mpandray anjara dia manoro ny Buffer, Hootsuite aro Socialoomph ho fitaovana ampiasaina amin’ny fitantanana ny media sosialy.
Raha izany dia mila haingana haiana ianao, eto no mila fantatrao rehefa mampiasa azy ireo ianao.
Azonao atay ny mampifandray ireo kaonty media sosialy amin’ny toerana iray ary manoritra ny hafatrao. Avelao Hootsuite ny fotoana handefasana azy. Azonao atao ny mamonjy ireo lahatsoratra mahasoa mba hampiasana indray aoriana.
Tena fitaovana lehibe izy io rehefa mitantana kaonty Twitter marobe. Azonao atao ny manangana tranokala filaharana amin’ny bitsikao. Manampy anao handamina eray sioka nosoratany izany isaky ny misy azy.
Andeha hojerentsika hoe inona no fitaovana hafa fitantanana no tambajotra sosialy ny soso-kevitra Twitter.
Hola, Mampiasa Social Oomph sy Tweetdeck aho fa tsy Mampiasa fitaovana ho an’ny Facebook.
Tiaia el meu buffer, JustRetweet ary Manageflitter. (Mampiasa fitaovana fitantanana fotsiny ho an’ny Twitter aho) #WHSRnetchat #socialmedia
– Jasper (@OpportunityTM) 28 de març de 2016
– Stephanie Buckley (@eatsleepchic_ie) 25 martsa 2016
Hola i tot un Twitter: no TweetDeck + "Namana na manaraha" dia mila ahy.
– Adrian Jock (@IMTipsNews) 2 d’abril de 2016
– Nancy Seeger (@SeegerN) 3 d’abril de 2016
Fitaovana enti-manam-pandrafetana an-tserasera amin’ny Twitter esy io mba hampiroborobo no fifamindram-pahefana ary hitondra fitarihana lehibe. Azonao atao ny manara-maso ny fifandraisana misy eo aminao ao anatin’ny fiarahamoninao. Ny tsara indrindra dia afaka mametraka sy mitantana ireo fanentanana samihafa araka ny fandaharam-potoanao manokana.
Mora ampiasaina eray. Ampio fotsiny ny fanavaozana rehetra ao amin’ny tranomboky ary mamoròna fandaharam-potoan’ny famoahana. Edger dia hampiasa ny fanavaozana ao amin’ny tranombokinao mba hamoronana filaharana. Ny ampahany tsara indrindra dia hoe, hameno sy hamenoana ny "automagic" izy ary tsy ho rava ny fanavaozana anao.
Ireto misy sombiny sasantsasany deuitana amin’ny fanontaniana faharoa
Mirindra ny lalao media sosialy ary mila iray na mihoatra ny blôginao. Ampifanaraho aminy na ho faty.
Article relacionat: Fandinihana ny haino aman-jery sosialy sy bilaogy momba ny raharaham-barotra mba hampiroboroboana ny fandraisana andraikitra
Mankanesa amin’ny fanontaniantsika farany amin’ny xat de Twitter
Tamin’ny Janoary 2016, Pat Flynn avy amin’ny Smart Passive Income dia dia 106.492,27 dòlars. Joguina Izy no manao (saika) ny orinasa madinika voapotsipika.
Ao amin’ny: # 1 mivantana afiliada mivantana, # 2 adiresy adiresy # 3 Amazona, # 4 Adsense / Media.net.
– Brian Jackson (@brianleejackson) 13 d’abril de 2016
– Angel Balichowski (@Angelcbali) 18 d’abril de 2016
Ny fampiasana bilaogy hanome vahaolana ho an’ireo mpamaky dia fomba iray malaza ihany koa eo amin’ny sehatry ny vola. És misy fomba ahafahanao manao ha estat
miangavy ny mpihaino sy ny zavatra ilainy, manome vahaolana izay azo atao (joguina ny hoe manatsara ny isa) ary requhana amin’izany
– Zac Johnson (@zacjohnson) 17 d’abril de 2016
Ny sasany amin’izy ireo dia mety mampiasa ny bilaogy ho jy ny fitaovana fitarihana taratra hampitomboana no varotra amin’ny vokatra na ny serivisy.
ampiasao no famhanam-bolongana ho an’ny taratra mpamorona ary mivarotra ny vokatra na ny serivisy. Inona ny hevitrao?
– Stephanie Clegg (@StephanieFrasco) 14 d’abril de 2016
Ampiasao ny blôginao ho fitaovana enti-màrqueting amin’ny fitaovana enti-manentana no mpanjifa ho an’ny mpividy tsy tapaka.
– Brent Jones (@brentjonline) 13 d’abril de 2016
Gael Breton avy amin’ny Authority Hacker dia nanadihady ny fomba namahanan’ny mpamaham-bolongana vola avy amin’ny fitoraham-blaogy ary tonga niaraka tamin’ireo sokajy lehibe 3 izy misy ny vola (izay manakaiky ny fanadihadiana):
Font: Authority Hacker
Ireto misy sombiny sasantsasany hamaranana no fanontaniana farany:
Bilaogera marobe no manao vola an-tserasera. Azo va ser atay.
Manaova hetsika ary meuatra avy amin’ireo tetik’asa eny an-dalana.
Article relacionat: Ahoana no hanaovana (bolongana) no vola: hevitra marim-pototra, tranga fandalinana, ary paikady momba ny fifamoivoizana
WHYR: Twitter és un missatge de resadresaka a la #WHSRnetChat. Manantena aho fa mahasoa anao izany.
Azonao no fa cap homeome, no és que no em fan els fanontanians, ni que no fan cap xat a Twitter. Mamelà anay ao amin’ny #WHSRnetChat Mba hizara no traikefanao na manontany ni fanontanianao manokana.
Alohan’ny hamaranako ny lahatsoratro dia manomeza creditit amin’ireo izay nanome valiny aminay ianao. Andao hifandray @WHSRnet
@sherisaid, @rozkwalker, @michelotta, @ 30ishblogging, @cucumbertown, @ cre8d, @ mousefashion95, @KintsugiOfLife, @aannadobreva, @SalmaDinani, @kevvieguy, @ DeepaliBhatt4, @teresamorone, @BeaverBuilder, @Ceaverassy , @ thejfoster42, @HoylesFitness, @ ImRose1, @ElleAyEsse, @MikeSMcDonald, @WebpresenceUK, @INNOVEXco, @B_Grimaldi, @shyvish, @mzoptimizm, @UwanaWhat, @ikechiawazie, @Minucaeena, @Minucaeena, @Minucaeena bloghandsseo
Nandray anjara tamin’ny Twitter chat vao haingana؟ Raha tsy izany dia inona no mitazona
Nandray anjara tamin’ny Twitter чат vao haingana? Raha tsy izany dia inona no mitazona